Sebengamakhulu Edlula Amathathu Asebetholakale beleCovid 19 eZimbabwe
Inani lasebefunyenwe beleCovid 19 lokhu liqonga
Inani lasebetholakale beleCovid 19, eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu-320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zamaQuarantine Centers, abaphindele ekhaya bevela kweleSouth Africa.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba asebehloliwe ukuba baleCovid 19 loba hatshi lokhu laqhamukayo elizweni, ngoMbimbitho lonyaka, sebezinkulungwane ezedlula amatshumi amahlanu-55,709. Asebesinde kulumkhuhlane sebengezwe ngabathathu, sebengamatshumi amane lasithupha-46, kwafa abane.
Emhlabeni jikelele abalecoronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikombia-7,360,778, kuthi asebebulewe yileligcikwane, sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane-414,528, kodwa asebesinde kulumkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu-3,632,714 kubika abenhlanganiso eye Worldometer.
Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe belegcikwane leli, sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili-203,880, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye-5,530, kwasinda inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisitshiyagalombili-86,068 kubikwa abenhlanganis eye Africa union.